Hosaziana sy horoahina ny mpitsara manao kolikoly hoy ny filoha rajoelina - Taratra du 9 aout 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil RANARISON Tsilavo Hosaziana sy horoahina ny mpitsara manao kolikoly hoy ny filoha rajoelina –...
Hosaziana sy horoahina ny mpitsara manao kolikoly hoy ny filoha rajoelina – Taratra du 9 aout 2019
Mba tsy ho resabe fotsiny. Nihaona tamin’ny eo anivon’ny Filankevitra ambony ny mpitsara (CSM) ny filoha Rajoelina, omaly teny Ambohitsorohitra. Hentitra ny tenany nanoloana azy ireo. “Tsy ekeko ny mpitsara mitanila. Tsy olom-bitsy no hampahory vahoaka ka tsy hampisy filaminana eto. Aoka izay ny namanamana. Ambany lalàna ny mpitsara. Hosazina ary horoahina ireo mpitsara manao kolikoly”, hoy ny filoha. Nambarany ho anton’ny fihaonana ny hanatsarana ny tontolon’ny fitsarana. Nanteriny fa ilaina ny fitsarana itokian’ny vahoaka ary lavitry ny kolikoly. “Betsaka ny fitarainana avy amin’ny vahoaka tonga aty amiko momba ny fitsarana. Miadana loatra ny asan’ny fitsarana. Marobe ireo naiditra vonjimaika am-ponja nefa tsy mbola voatsara”, hoy ihany ny filoha. Nohitsiny fa maro ireo manana ny rariny nefa resy eny amin’ny fitsarana.
Tsy matoky mpitsara ka manao fitsaram-bahoaka…
Tsy matoky ny mpitsara ny olona ka lasa manao fitsaram-bahoaka. Tsy hilamina ny tany raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsarana, araka ny fanamafisany. Manoloana izany, nambarany fa haverina ny hasin’ny CSM hanana ny tena asany, ny andraikiny. Hapetraka ny sivana ka tokony hitantana ny rafi-pitsarana rehetra ny mpitsara mendrika. Nomeny toromarika koa ny CSM mba hanaovana fanadihadiana ireo fitarainan’olon-tsotra fa tokony hisy tohiny avokoa ireny. Nambaran’ny filoha fa hatao matetika ny fihaonana, tsy hitanila ny asa atao ary ilaina ny fitsarana marina eto amin’ny firenena
Article précédentPoint sur l’affaire de la corruption au sein de l’ENMG viva madagascar journal VM 08 08 19
Article suivant«La lutte contre la corruption est parmi les actions prioritaires inscrites dans politique générale de l’État», a indiqué la Présidence hier – Les nouvelles du 9 aout 2019